October 3, 2020 804
शनिबार काठमा डौं उपत्यका:का विभिन्न स्थानमा ५ घण्टा बत्ति काटिने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाअनुसार ललितपुरको लगनखेल वितरण केन्द्र, पुल्चोक वितरण केन्द्र र काठ’माडौंको बालाजु वितरण केन्द्रभित्र पर्ने सबै स्थानमा ५ घण्टा बत्ति काटिने जनाइ’एको छ ।
प्रधिकरणले लगनखेल र पुल्चोक वि’तरण केन्द्रअन्तर्गत पर्ने खोकना फिडरमा मिटरिङ युनिट परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले शनिबार बिहान ११ बजेदे’खि दिउँसो २ बजेसम्म बत्ति काटि’ने जनाएको छ ।
त्यसअन्तर्गत पर्ने गणेश’थान, एकान्तकुना, खाद्य गोदाम, मेडीसिटी हस्पिटल, आदिनाथ मार्ग्, गणेश मन्दिर, मन्जुश्री मार्ग, भन्ज्याङ् पिपल बोट, मगरगाउँ, सानो खोकना, खोकाना, कार्यवि’नायक, बुङमती क्षेत्र, नेवा ईट्टा, चुनिखेल बत्ती काटिने छ,
त्यस्तै कतार एम्बेस्सी, खोईचा, फर्सिडोल, जोर्खु, टोक’लमाथ, खहरे, डुकुछाप, दनुवार सौर्य दैनिक’मा खबर छ ।बस्तीलगायतका क्षेत्रहरुका बत्ति काटिने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै बा’लाजु वितरण केन्द्र अन्तर्गत पर्ने स्थानहरुमा पनि बत्ति काटिने जनाइएको छ ।
Prevगायक बद्री पंगेनीको अतिनै मार्मिक गीत ”बाटो हेरी नरोउ आमा” (हेर्नुहोस् भिडियो)
Nextऐश्वर्या जस्तै सुन्दरी ! धेरैले ऐश्वर्या नै ठाने, को हुन् त उनी ? हेर्नुहोस्
बिहेपछि श्वेता र विजयन्द्रको पुरा परिवारबिच पहिलो भेट, श्रीमानसँग नाचिन् श्वेता, हेर्नुहोस्…
‘जिउँदो लाश’ बनेको ३ वर्षपछि निशाको उ’द्धार, आजदेखि नर्भिक अस्पताल`मा उप`चार सुरु